एक व्यक्ति जसको हातगोडामा रुख उम्रीरहन्छ, भन्छन्, " म मुक्ति चाहन्छु । मेरो हात काटीदिनुहोस् !" - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ढाका । एक व्यक्ति जसको हातगोडामा रुख जस्तो संरचना उम्रिरहने गर्दछ । उनैले हालसालै दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर दुनियाँभर चर्चा-परिचर्चा शुरु भएको छ ।
बंगलादेशी नागरिक अब्दुल बजनदार जसलाई दुनियाँ ‘ट्री म्यान’ को नामले चिन्दछ । उनले हिजो(सोमबार) बताए अनुसार, उनी आफ्नो हात काट्न चाहन्छन् । अत्याधिक असह्य पिडा र हैरानीको पश्चात अब्दुलले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
अब्दुल एक अज्ञात रोगको शिकार भएका छन् । सोहि कारण उनको हातमा बारम्बार रुख जस्तो संरचना(रुखको हाँगा)उम्रिरहने गरेको छ । सन् २०१६ देखि हालसम्म उनले २५ भन्दा ज्यादा अप्रेशन गरिसकेका छन् ।
एएफपीको अनुसार, डाक्टरहरुलाई विश्वास थियो कि उनलाई यस पिडाबाट मुक्ती दिलाउन सकिनेछ तर गत साल मे मा भएको एक सर्जरी पश्चात अब्दुल ढाका स्थित एक क्लिनिकमा पुगेका छन् ।
एक बच्चाको बाउ समेत रहेका २८ वर्षीय अब्दुल आफ्नो झनै बिग्रदो शारीरिक अवस्थासहित यसै वर्षको जनवरीमा पुन: अस्तलामा भर्ना भए । तर यसपटक उनको हातमा पछिल्ला समयका भन्दा पनि विकराल अवस्था देख्न सकिन्छ ।
उनले बताए, ” म अब थप पिडा सहन सक्दिन । म यस समस्याबाट पार पाउन चाहन्छु । म राती सुत्न सक्दिन ! मैले डाक्टरहरुलाई भन्दै आइरहेको छु कि मेरो हात काटीदेओ, मलाई सन्तोष मिल्छ ।”
अब्दुलको आमा अमीना बीबी छोराको यस कुरासँग सहमत छिन । उनले छोराको कुरासँग सहमति जनाउँदै भनिन्, ” कमसेकम यसलाई पिडा त हुदैन ! अहिले त यो नर्कमा बाचिरहेको छ ।”
अब्दुल एपिडर्मोडिसप्लासिया वेरुसीफोर्मिस (Epidermodysplasia Verruciformis) नामक रोगसँग जुधिरहेको छ । यस रोगलाई ‘ट्री म्यान सिन्ड्रोम’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
अब्दुल राम्रो उपचारको लागि विदेश जान चाहन्छन्त । तर उनको आर्थिकस्तर कमजोर छ । ढाका मेडिकल कलेजको प्रमुख सर्जन सामन्था लाल सेनले बताएअनुसार सात चिकित्सकको एक बोर्डले मंगलबाराको अब्दुलको हालतमाथि चर्चा गर्नेछ । उनले बताए, ” उनले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेका छन् । तर हामी पनि उनी जे चाहन्छन् त्यै गर्दा नै राम्रो हुने देख्छौं ।”
अब्दुलको यस रोग भएको थाहा पाए लगत्तै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उनको निशुल्क उपचार हुने बताएकी थिइन् । सोहि निर्णय पश्चात आफ्नो पहिलो चरणको उपचारको सिलसिलामा अब्‍दुल अस्पतलाको प्राइभेट सेक्शनमा दुई वर्षसम्म रहेका थिए ।
यो विश्वास गरिन्छ कि, विश्वमा आधा दर्जनभन्दा कम व्यक्ति यस रोगले प्रताडित छन् । सन् २०१७ मा पनि ढाका मेडिकल कलेजले यसै रोगबाट प्रताडित बंगलादेशी बालिकाको उपचार गरेको थियो ।
डाक्टरले उनको अप्रेशन सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको बताएका थिए । तर बालिकाको पिताले भने अप्रेशन पश्चात रुख उम्रन नरोकिएको, झनै बढेको बताएका थिए । तत्पश्चात सो परिवार गाउँ फर्किएको थियो ।